Ngokwehlobo lwawo, isitayela seProvence singabhekwa njengento enhle futhi elula, ngakho-ke kuhle kakhulu ekamelweni. Uma usebenzisa lesi sitayela ekwakhiweni kwekamelo lokulala, kuzodingeka wenze imizamo eminingi, kodwa ekugcineni uzothola ipharadesi lapho kuyoba mnandi ukuchitha isikhathi ngemuva kwezinsuku zokusebenza zokusebenza. Kumele uqaphele futhi isikhathi sokuthi isitayela se- "Provence" ekamelweni lilula kakhulu kunokuthi ekhishini.
Ngakho-ke, yisiphi isitayela seProvence, nokuthi singenza kanjani siphile esibonelweni sekamelo lokulala.
Njengomthetho, lapho sithuthukisa lesi sitayela esibucayi, sisebenzisa ngokugqamile imibala emhlophe-eluhlaza okwesibhakabhaka, emhlophe-ephuzi, e-pastel kanye ne-powder, okuzobekelwa ukuhluka okugqamile. Ngemibala ekhanyayo, hhayi kuphela izindonga, kodwa futhi futhi phansi. Kuyinto efiselekayo ukuthi yenziwa ngomuthi wemvelo wokhuni lombala. Kuvunyelwe ukusebenzisa amaphepheni okukhanya, isibonelo, lokhu kungase kungabi ikhephe enkulu, kodwa imibhede encane yombhede, kodwa kuyadingeka ukugwema zonke izinhlobo zezimhlobiso.
Ukuthuthukisa ingaphakathi ngesitayela se-Provence, kubaluleke kakhulu ukulandela ukuhlanganiswa kwemibala, ngoba imithunzi engafani kahle inganikeza noma ubani ukungafani okungadingekile futhi unciphise yonke imizamo yakho ukuze ufike ku-zero. Kwenzeka futhi lokhu kungukuthi ingaphakathi lisebenzisa ifenisha yezinkuni, kodwa lokhu kuyinto ehlukile kunomthetho.
Ukulala ngesitayela se-Provence
Umbhede kufanele wenziwe ngezinkuni zemvelo noma insimbi. Ingemuva nemilenze yombhede kufanele iphathwe noma iqoshwe, kodwa qaphela futhi ukhethe umbhede ngemilenze eqinile. Kuhle kakhulu kulesi sitayela esithambile semibhede yevintage vintage. Zibukeka zibiza kakhulu futhi zinikezela igumbi lesikhumba esithambile somvini othile.
Qinisekisa ukuthi unakekele ubukhona emaphandleni - bazofaka imfihlakalo ngaphakathi bese beletha ngempumelelo ekamelweni lokuhlola.
Ukulala kufanele kube nezinselele ezinhle, ukuhlobisa, ukuthunga. Kubaluleke kakhulu ukuthi lezi zakhi azifani neze-saristocratic futhi zikanokusho, kumele zenzele ububele obukhulu ngenduduzo yasemakhaya. Gwema ukukhazimula nobukhazikhazi, ukuziqhenya.
Ayikho ikamelo lokulala elisesitayela seProvence angeke senze ngaphandle kwegceke, okungeke kube khona kuphela izibani ezinhle, kodwa kunama-knack-knacks amaningi adumile ahlekayo.
Kuyinto efiselekayo ukufaka egumbini kanye netafula elihle lokugqoka. Kufanele kube nenhle kakhulu, kufana nesihlalo eceleni kwayo. Yize kuvunyelwe ukuthatha isikhundla se-stool nge-ottoman noma isihlalo saloya encane esinemilenze emincane. Etafuleni, futhi, ngaphandle kwezimonyo ezidingekayo nama-perfume, ama-baubles amahle namafrimu kufanele athole isithombe.
Esinye sezimo eziyinhloko zesitayela seProvence ukutholakala kwefenisha enhle . Izinto kufanele zibe nemilenze egobile, iveza ukudlala.
Ama-trinkets ozohlobisa ikamelo lakho lokulala kufanele futhi abe mnandi, ahle, asayizi amancane, angakhamululi. Amadonga kufanele ahlotshiswe ngezibuko, ama-embroideries, ukudweba. Izindonga ezingenalutho ekamelweni lokulala zizokwenza igumbi lingabi nalutho futhi lingapheli, okufanele ligwenywe.
Kuyomane kumangalisa uma zonke izakhi onquma ukuhlobisa igumbi lakho lokulala ziyoba nesici esivamile ukuze kutholakale ukuvumelana okuhambisana nokuhambisana. Iphethini ephindaphindiwe noma umhlobiso onfenisha nezindonga kuyindlela engcono kakhulu!
Windows - enye ingxenye ebalulekile yokuhlobisa
Ngokuvamile, isitayela se-Provence yindlela engcono kakhulu yezindawo ezizimele, esimweni lapho ifasitela ishiya khona indawo yokuqala, ngakho-ke ukuthi ayidingi ikhethini. Ekuqaleni, lesi sitayela kwakubhekwa ngokuthi "zasemaphandleni", futhi amafasitela ayengaba usayizi omncane.
Kwanele ukumboza iwindi ngendwangu ekhanyayo, e-airy, eguquguqukayo. Nakuba isitayela nokuthanda ama-trinkets amancane, kodwa isikhathi eside kakhulu lesi simiso asizange sisebenze kumafasitela, kuze kube yilapho i-provence idlulele ezindlini ezinkulu nezindlu ezinamafasitela amakhulu. Kodwa noma kunjalo, ku-windowshistil ayengashintshi, kufanele abe evulekile ngangokunokwenzeka, mahhala futhi akeke ukukhanya nokukhanya emoyeni.
Izindwangu kufanele zenziwe ngokwezifiso zemvelo futhi zidwetshwe ngemibala ye-pastel. Khumbula umthetho owodwa obaluleke kakhulu - i-Provence yisitayela sembala yemvelo nezinto zokwakha, ayiwamukeli imibala ekhanyayo, izinto ezithintekayo kanye ne-plastic.
Izesekeli, ezenziwa ngendwangu, khetha ngokusemthethweni - i-satin, i-cambric, i-chintz, ilineni. Izinsimbi ze-knickknacks zingenziwa ezivela ku-ceramics, izinkuni, ingilazi, i-porcelain, amakhadibhodi. Ngokuvamile lezi zinto zihlotshiswe nge-decoupage, zikhula ngokweqile. Into eyithandayo ye-Provence yayiyizimbali. Lokhu akusebenzi nje kuphela ekuhlobiseni i-gizmos, kodwa futhi kumatafula amancane okugqekezwa kwe-vase-crocked bedside nge-bouquets amahle we-peonies, isibonelo.
Isitayela se-Provence yekamelo lokulala lihle kunabaningi: linikeza ubuzwe, ukufudumala, ukuthula, imihlobiso ingenziwa ngesandla, unikeze ikamelo elihlukile, kuphela.
Izitayela zanamuhla ezakhiweni zangaphakathi
Ukuhlobisa isitayela se-Art Nouveau
I-Feng Shui yoLuthando Nemali
Jack-lantern, noma Indlela yokusika ithanga ngendlela efanele kuHeelloin
Indlela yokwenza indlu ehlelekile futhi enhle?
Ukucindezeleka kwengqondo kwengane
Bouquet nge ukumangala okumnandi
Ngokuba yini, ngaphandle kokuzala, lo muntu angasiza
Indlela yokunqoba isifiso esinonya ngezindlela zomuntu?
Lokho abantu abangakuthandi ebuhlotsheni bomndeni
Indlela yokubhekana nesifo sokudla ebusuku
Iklabishi isobho nge turkey
Umkhosi weGlamor: Ukubambisana Okubambisene Namnandi ne-Swarovski
Yiba okukhethekile: izingubo ezinhle ezibomvu zonyaka omusha
Ukushisa esifubeni: izimbangela ze-cardiogenic ne-noncardiogenic
Izimpawu zokukhulelwa: amagama okuqala
I-pike i-stew ne-sauce
I-Horoscope yonyaka we-tiger ngenkunzi
Ikhekhe nge anyanisi
Indlela yokusebenzisa ithoni kumuntu
I-shampoo yemvelo ngezandla zakho: izindlela zokupheka ezenziwe kahle